တဝီဝီနဲ့ ပျံနေတဲ့ ခြင်ရဲ့ အသံကိုနားထောင်ပြီး ဒါဟာ လူတွေကို အန္တရာယ် ပေးနိုင်တဲ့ ခြင်ဟုတ်မဟုတ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ဖ်ါထုတ်နိုင်ပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်း တင်ပြပေးပါမယ်။
ကိုယ့်အနားမှာ ခြင်တကောင် တဝီဝီနဲ့ ပျံနေမယ်ဆိုရင် ဒီအသံက စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဒီခြင်ရဲ့ အသံကို နားထောင်ပြီး သူဟာ လူတွေအတွက် အန္တရာယ် ပေးနိုင် မပေးနိုင်ဆိုတာကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ပါပြီ။
((NAT SOUND MOSQUITOES))
အခု ကြားရတဲ့ အသံပိုင်ရှင် ခြင်ကလေးတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေအတွက် အန္တရာယ် အကြီးဆုံး သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က ငှက်ဖျား၊ ငန်းဝါ အဖျားနဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးလို ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေကို သယ်လာတတ်တဲ့ အတွက် ကမ္ဘာတလွှားမှာ နှစ်စဉ် လူပေါင်း သိန်းနဲ့ချီ သေဆုံးရတာပါ။
အခုလို လူကို သေစေတဲ့အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အကောင်လေးတွေကို ဘယ်မှာ တွေ့နိုင်တယ် ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ app ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ထွင်ပါတယ်။. ခြင်တွေရဲ့ အသံကို သုံးပြီးထွင်ထားတဲ့ ဒီ app ကို Google ရဲ့ Android ဖြစ်ဖြစ် Apple ရဲ့ iOS ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လက်ကိုင်ဖုံးမှာ မဆို သုံးနိုင်ပါတယ်။
လက်ကိုင်ဖုံးရှိတဲ့ ဘယ်သူမဆို ဒီ app ကို သုံးပြီး ဘယ်လို ခြင်အမျိုးအစားလဲ ဆိုတာ သိအောင် လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီရောဂါဆိုးတွေ မရအောင်
တားဆီးနိုင်တယ်လို့ ဒီ app တီထွင်တဲ့ အဖွဲ့က - Haripriya Vaidehi Narayanan က ပြောပါတယ်။
“ကိုယ့် အနားမှာ ခြင်တကောင် ရောက်လာတယ်ဆိုရင် ကိုယ့် လက်ကိုင်ဖုံးကို ဖွင့်လိုက်ရုံပဲ။ ပြီးရင် ဒီ application ကို ဖွင့် - အဲဒီခြင် ရှိတဲ့ နေရာကို ဖုံးနဲ့ ချိန်လိုက်။ နောက် မှတ်တမ်းတင်တဲ့ record ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ”
Narayanan ဟာ Stanford တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသူတဦး အနေနဲ့ ဒီစီမံကိန်းမှာ စပြီး ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ အခုအခါမှာတော့ Los Angeles က ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် တက္ကသိုလ် - ကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာ - ရောဂါပြီး ပညာဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
“ခြင်က သူ့အတောင်ပံတွေကို တဖျပ်ဖျပ်ခတ် ပြီး ကိုယ့်နားမှာ စပြီး ပျံဝဲလာမယ် ဆိုရင် တဝီဝီနဲ့ စိတ်ရှုပ်စရာအသံကို ကြားရမှာပါ။ ဒီအသံကို ကျမတို့က Abuzz app နဲ့ အသံဖမ်းပြီး record လုပ်ရပါတယ်”
ခြင်တွေ သယ်နိုင်တဲ့ရောဂါ အများအပြား အတွက် ကုသဖို့ ဆေးမရှိသလို သူတို့အတွက် ကာကွယ်ဆေးလည်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါတွေ ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လုပ်မယ် ဆိုရင် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက ခြင်တွေကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားနှိမ်နင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ငှက်ဖျားတို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးတို့လို ခြင်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့အခါ အရေးအကြီးဆုံး အဆင့်က ခြင်တွေ ဘယ်မှာရှိနေတယ် ဆိုတာကို သိဖို့ လိုတယ်။”
ဒါပေမယ့် ခြင်တွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ သမရိုးကျ နည်းက အချိန်ကုန်သလို စားရိတ်ကလည်း ကြီးမားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ခြင်တွေကို ထောင်ဖမ်းဖို့က လူအင်အား အတော်လိုသလို ဖမ်းမိတဲ့ခြင်ဟာ ဘာအမျိုးစားလည်း ဆိုတာကို ပြောနိုင်ဖို့လည်း အသေအချာလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလည်း လိုအပ်လို့ပါ။
ခြင်မျိုးစိတ်ပေါင်းက ၃၅၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအထဲမှာ လူကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ မျိုးစိတ်က ၄၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်လို့ ဒီစီမံကိန်းမှာ စုံစမ်းရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ယူထားတဲ့ Stanford တက္ကသိုလ် ဇီဝအင်ဂျင်နီယာ ဌာနက ပါမောက္ခ Manu Prakash က ပြောပါတယ်။
“ကိုယ့် အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ခြင်ဟာ စိတ်အနှောက်ယှက်ပဲ ပေးတဲ့ခြင်လား လူအတွက် အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်တဲ ခြင်လား ဆိုတာ သိဖို့ လိုပါတယ်။ ”
ဒီလို သိနိုင်ဖို့ Prakash ရဲ့ အဖွဲ့က ခြင်တွေရဲ့ အသံကို နားထောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းက ခြင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အတောင်တွေကို အပေါ်အောက် ခတ်ခဲ့အခါ မြည်တဲ့ အသံက ခြင်မျိုး တမျိုးနဲ့ တမျိုး မတူကြတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစိတ်တိုင်းအတွက် တမျိုးနဲ့ တမျိုး တဝီဝီမြည်သံဟာ နဲနဲလေးစီ လောက်တော့ ကွဲကြပါတယ်။
အခု ကြားရတဲ့ အသံဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်ပဲ ပေးတဲ့ ခြင်တကောင်ရဲ့ အသံပါ။ ဒီအမျိုးအစားက လူတွေမှာ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကို သယ်လာ တတ်တဲ့ အမျိုးစား မဟုတ်ပါဘူး။
အခု ကြားရတဲ အသံကတော့ ငှက်ဖျားရောဂါ သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ပေးနိုင်ခြေရှိတဲ့ ခြင်အမျိုးအစား ရဲ့ တဝီဝီ မြည်သံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီခြင်ရဲ့ ဝီသံကို လက်ကိုင်ဖုံးထဲက Abuzz app နဲ့ ဖုံးသုံးသူက မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ အသံဖမ်းတာကလည်း တစက္ကန့် - ၂ စက္ကန့်လောက်ပဲ လိုပါတယ်။ အဲဒီအသံကို application က သူ့မှာ ရှိတဲ့ database အချက်အလက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဘယ်လို ခြင်မျိုးစိတ်မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို ထုတ်ပေးပါတယ်။
တကယ်တော့ ဆဲလ်ဖုံး လို့ခေါ်တဲ့ လက်ကိုင်ဖုံးတွေ ဒါမှမဟုတ် စမတ်ဖုံးတွေဟာ ဘီလီယံနဲ့ ချီတဲ့ လူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ ရောက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်တုန်းက မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခု ခြင်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စောင့်ကြည့် နိုင်ပြီလို့ သူတို့ အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
“ဒီ App ကို သုံးဖို့အတွက် စမတ်ဖုံး အမျိးအစား သိပ်ကောင်းကောင်း ရှိစရာမလိ်ုပါဘူး။ ရိုးရိုး လက်ကိုင်ဖုံး လောက်ဆို ကောင်းကောင်း သုံးလို့ ရပါပြီ။ ”
ကမ္ဘာတလွှားက လူတွေ ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ ခြင်အမျိုးအစား တွေ ဘယ်မှာ နေတယ် ဆိုတာကို ပြတဲ့ မြေပုံတွေကို ဒီ application က တဖြေးဖြေးထုတ်ယူပါတယ်။
ဒါဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရုံတင် မကပဲ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေ အတွက်လည်း ဘယ်ဒေသမှာ ဘာရောဂါ ဖြစ်လာတော့မယ် ဆိုတာနဲ့
ဘယ်နေရာမှာတော့ ခြင်နှိမ်နင်းရေး လုပ်ရမယ် ဆိုတာတွေကို ခန့်မှန်းတွက်ဆ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကပါ ပါဝင် လုပ်ဆောင်မှုမျိုးဟာ ခြင်ကနေ ဖြစ်တဲ့ ရောဂါဆိုင်ရာ ပြဿနာကြီးတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ အဓိက ကဏ္ဍကနေ ပါဝင်မယ်လို့လည်း Prakash က ယုံကြည်ပါတယ်။
“ဒီအသုံးချနည်းက လူများများ ပါဝင်လာလေ ပိုကောင်းလေမို့ ကျနော်တို့ သိပ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပါ။ ခပ်ရှင်းရှင်း ပြောမယ်ဗျာ။ တကယ်လို့ နေ့တိုင်းလိုလိုပဲ သိန်းနဲ့ ချီတဲ့ လူတွေက ခြင်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ကြမယ် ဆိုရင် တွက်ကြည့်စမ်းပါ။ တကမ္ဘာလုံးပါလာဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အသိုင်းဝိုင်းမျိုးကို ဖန်တီးပေးမယ့် သဘောဖြစ်ပါတယ်။”
Abuzz app ကို ဒီဇင်ဘာ ဒါမှမဟုတ် ဇန်နဝါရီ လောက်မှာfree download လုပ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို abuzz.stanford.edu. ဝက်ဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာမှာ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ Oxford တက္ကသိုလ်က နောက် သုတေသနပညာရှင်များ အဖွဲ့တဖွဲ့ကလည်း အလားတူ ပဲ လက်ကိုင်ဖုံး သုံး app တခု ဖြစ်တဲ့ Mozzwear ကို သုံးပြီး ငှက်ဖျား ခြင်တွေကို သူတို့ရဲ့ အသံတွေနဲ့ ခွဲခြားသိဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။
ခြင်တွေရဲ့ တဝီဝီမြည်တဲ့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ အများစုက ရိုက်ဖို့ ပြင်နေကြပေမယ့် ခြင်ကို မရိုက်ခင် လက်ကိုင်ဖုံးကို ထုတ်ပြီး အရင် မှတ်တမ်းတင်ကြဖို့
သုတေသန ပညာရှင်တွေကမျှော်လင့် နေကြကြောင်း
VOA သတင်းထောက် Asher Jones ရဲ့ ပြောကြားချက်ကို တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ကိုယျ့အနားမှာ ခွငျတကောငျ တဝီဝီနဲ့ ပြံနမေယျဆိုရငျ ဒီအသံက စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစရာပါ။ ဒါပမေယျ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေတော့ ဒီခွငျရဲ့ အသံကို နားထောငျပွီး သူဟာ လူတှအေတှကျ အန်တရာယျ ပေးနိုငျ မပေးနိုငျဆိုတာကို ဖျေါထုတျနိုငျပါပွီ။
အခု ကွားရတဲ့ အသံပိုငျရှငျ ခွငျကလေးတှဟော ကမ်ဘာပျေါမှာ လူတှအေတှကျ အန်တရာယျ အကွီးဆုံး သတ်တဝါဖွဈပါတယျ။
သူတို့က ငှကျဖြား၊ ငနျးဝါ အဖြားနဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေးလို ရောဂါတှကေို ဖွဈစတေဲ့ ဘကျတီးရီးယား တှကေို သယျလာတတျတဲ့ အတှကျ ကမ်ဘာတလှားမှာ နှဈစဉျ လူပေါငျး သိနျးနဲ့ခြီ သဆေုံးရတာပါ။
အခုလို လူကို သစေတေဲ့အထိ ဒုက်ခပေးနိုငျတဲ့ အကောငျလေးတှကေို ဘယျမှာ တှနေို့ငျတယျ ဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့နိုငျတဲ့ app ကို သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ထှငျပါတယျ။. ခွငျတှရေဲ့ အသံကို သုံးပွီးထှငျထားတဲ့ ဒီ app ကို Google ရဲ့ Android ဖွဈဖွဈ Apple ရဲ့ iOS ဖွဈဖွဈ ဘယျလကျကိုငျဖုံးမှာ မဆို သုံးနိုငျပါတယျ။
လကျကိုငျဖုံးရှိတဲ့ ဘယျသူမဆို ဒီ app ကို သုံးပွီး ဘယျလို ခွငျအမြိုးအစားလဲ ဆိုတာ သိအောငျ လုပျနိုငျတဲ့အတှကျ ဒီရောဂါဆိုးတှေ မရအောငျ
တားဆီးနိုငျတယျလို့ ဒီ app တီထှငျတဲ့ အဖှဲ့က - Haripriya Vaidehi Narayanan က ပွောပါတယျ။
“ကိုယျ့ အနားမှာ ခွငျတကောငျ ရောကျလာတယျဆိုရငျ ကိုယျ့ လကျကိုငျဖုံးကို ဖှငျ့လိုကျရုံပဲ။ ပွီးရငျ ဒီ application ကို ဖှငျ့ - အဲဒီခွငျ ရှိတဲ့ နရောကို ဖုံးနဲ့ ခြိနျလိုကျ။ နောကျ မှတျတမျးတငျတဲ့ record ဆိုတဲ့ ခလုပျကို နှိပျလိုကျရုံပါပဲ”
Narayanan ဟာ Stanford တက်ကသိုလျက ဘှဲ့လှနျကြောငျးသူတဦး အနနေဲ့ ဒီစီမံကိနျးမှာ စပွီး ပါဝငျခဲ့တာပါ။ သူဟာ အခုအခါမှာတော့ Los Angeles က ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျ တက်ကသိုလျ - ကိုယျခံအားဆိုငျရာ - ရောဂါပွီး ပညာဌာနမှာ တာဝနျထမျးဆောငျနသေူ ဖွဈပါတယျ။
“ခွငျက သူ့အတောငျပံတှကေို တဖပျြဖပျြခတျ ပွီး ကိုယျ့နားမှာ စပွီး ပြံဝဲလာမယျ ဆိုရငျ တဝီဝီနဲ့ စိတျရှုပျစရာအသံကို ကွားရမှာပါ။ ဒီအသံကို ကမြတို့က Abuzz app နဲ့ အသံဖမျးပွီး record လုပျရပါတယျ”
ခွငျတှေ သယျနိုငျတဲ့ရောဂါ အမြားအပွား အတှကျ ကုသဖို့ ဆေးမရှိသလို သူတို့အတှကျ ကာကှယျဆေးလညျး မရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီရောဂါတှေ ကို ထိနျးခြုပျဖို့ လုပျမယျ ဆိုရငျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးက ခွငျတှကေိုပဲ ပဈမှတျထားနှိမျနငျးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
“ငှကျဖြားတို့ သှေးလှနျတုပျကှေးတို့လို ခွငျကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ ရောဂါတှကေို ကိုငျတှယျတဲ့အခါ အရေးအကွီးဆုံး အဆငျ့က ခွငျတှေ ဘယျမှာရှိနတေယျ ဆိုတာကို သိဖို့ လိုတယျ။”
ဒါပမေယျ့ ခွငျတှကေိုစောငျ့ကွညျ့မှတျတမျးတငျတဲ့ သမရိုးကြ နညျးက အခြိနျကုနျသလို စားရိတျကလညျး ကွီးမားပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ခွငျတှကေို ထောငျဖမျးဖို့က လူအငျအား အတျောလိုသလို ဖမျးမိတဲ့ခွငျဟာ ဘာအမြိုးစားလညျး ဆိုတာကို ပွောနိုငျဖို့လညျး အသအေခြာလကေ့ငျြ့ပေးထားတဲ့ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှလေညျး လိုအပျလို့ပါ။
ခွငျမြိုးစိတျပေါငျးက ၃၅၀၀ လောကျရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအထဲမှာ လူကိုအန်တရာယျပေးနိုငျတဲ့ မြိုးစိတျက ၄၀ လောကျပဲ ရှိတယျလို့ ဒီစီမံကိနျးမှာ စုံစမျးရေးအတှကျ အဓိကတာဝနျယူထားတဲ့ Stanford တက်ကသိုလျ ဇီဝအငျဂငျြနီယာ ဌာနက ပါမောက်ခ Manu Prakash က ပွောပါတယျ။
“ကိုယျ့ အိမျခွံဝငျးထဲမှာ ရှိနတေဲ့ ခွငျဟာ စိတျအနှောကျယှကျပဲ ပေးတဲ့ခွငျလား လူအတှကျ အန်တရာယျ ဖွဈစနေိုငျတဲ ခွငျလား ဆိုတာ သိဖို့ လိုပါတယျ။ ”
ဒီလို သိနိုငျဖို့ Prakash ရဲ့ အဖှဲ့က ခွငျတှရေဲ့ အသံကို နားထောငျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။ အဓိကအကွောငျးက ခွငျတှဟော သူတို့ရဲ့ အတောငျတှကေို အပျေါအောကျ ခတျခဲ့အခါ မွညျတဲ့ အသံက ခွငျမြိုး တမြိုးနဲ့ တမြိုး မတူကွတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ မြိုးစိတျတိုငျးအတှကျ တမြိုးနဲ့ တမြိုး တဝီဝီမွညျသံဟာ နဲနဲလေးစီ လောကျတော့ ကှဲကွပါတယျ။
အခု ကွားရတဲ့ အသံဟာ စိတျအနှောကျအယှကျပဲ ပေးတဲ့ ခွငျတကောငျရဲ့ အသံပါ။ ဒီအမြိုးအစားက လူတှမှော ရောဂါဖွဈစတေဲ့ ကပျပါးကောငျတှကေို သယျလာ တတျတဲ့ အမြိုးစား မဟုတျပါဘူး။
အခု ကွားရတဲ အသံကတော့ ငှကျဖြားရောဂါ သယျဆောငျနိုငျတဲ့ အန်တရာယျ ပေးနိုငျခွရှေိတဲ့ ခွငျအမြိုးအစား ရဲ့ တဝီဝီ မွညျသံ ဖွဈပါတယျ။
ဒီခွငျရဲ့ ဝီသံကို လကျကိုငျဖုံးထဲက Abuzz app နဲ့ ဖုံးသုံးသူက မှတျတမျးတငျနိုငျပါတယျ။ အသံဖမျးတာကလညျး တစက်ကနျ့ - ၂ စက်ကနျ့လောကျပဲ လိုပါတယျ။ အဲဒီအသံကို application က သူ့မှာ ရှိတဲ့ database အခကျြအလကျတှနေဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး ဘယျလို ခွငျမြိုးစိတျမြိုး ဖွဈနိုငျတယျ ဆိုတာကို ထုတျပေးပါတယျ။
တကယျတော့ ဆဲလျဖုံး လို့ချေါတဲ့ လကျကိုငျဖုံးတှေ ဒါမှမဟုတျ စမတျဖုံးတှဟော ဘီလီယံနဲ့ ခြီတဲ့ လူတှရေဲ့ လကျထဲမှာ ရောကျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရငျတုနျးက မလုပျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အခု ခွငျတှကေို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ စောငျ့ကွညျ့ နိုငျပွီလို့ သူတို့ အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။
“ဒီ App ကို သုံးဖို့အတှကျ စမတျဖုံး အမြိးအစား သိပျကောငျးကောငျး ရှိစရာမလိုပါဘူး။ ရိုးရိုး လကျကိုငျဖုံး လောကျဆို ကောငျးကောငျး သုံးလို့ ရပါပွီ။ ”
ကမ်ဘာတလှားက လူတှေ ပေးတဲ့ အခကျြအလကျတှပေျေါမူတညျပွီး အန်တရာယျကွီးတဲ့ ခွငျအမြိုးအစား တှေ ဘယျမှာ နတေယျ ဆိုတာကို ပွတဲ့ မွပေုံတှကေို ဒီ application က တဖွေးဖွေးထုတျယူပါတယျ။
ဒါဟာ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ အတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈစရေုံတငျ မကပဲ ကနျြးမာရေးအာဏာပိုငျတှေ အတှကျလညျး ဘယျဒသေမှာ ဘာရောဂါ ဖွဈလာတော့မယျ ဆိုတာနဲ့
ဘယျနရောမှာတော့ ခွငျနှိမျနငျးရေး လုပျရမယျ ဆိုတာတှကေို ခနျ့မှနျးတှကျဆ နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးကပါ ပါဝငျ လုပျဆောငျမှုမြိုးဟာ ခွငျကနေ ဖွဈတဲ့ ရောဂါဆိုငျရာ ပွဿနာကွီးတှကေို ဖွရှေငျးရာမှာ အဓိက ကဏ်ဍကနေ ပါဝငျမယျလို့လညျး Prakash က ယုံကွညျပါတယျ။
“ဒီအသုံးခနြညျးက လူမြားမြား ပါဝငျလာလေ ပိုကောငျးလမေို့ ကနြျောတို့ သိပျစိတျလှုပျရှားနတောပါ။ ခပျရှငျးရှငျး ပွောမယျဗြာ။ တကယျလို့ နတေို့ငျးလိုလိုပဲ သိနျးနဲ့ ခြီတဲ့ လူတှကေ ခွငျတှကေို မှတျတမျးတငျကွမယျ ဆိုရငျ တှကျကွညျ့စမျးပါ။ တကမ်ဘာလုံးပါလာဖို့ လိုအပျနတေဲ့ အသိုငျးဝိုငျးမြိုးကို ဖနျတီးပေးမယျ့ သဘောဖွဈပါတယျ။”
Abuzz app ကို ဒီဇငျဘာ ဒါမှမဟုတျ ဇနျနဝါရီ လောကျမှာfree download လုပျနိုငျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
အပွညျ့အစုံကို abuzz.stanford.edu. ဝကျဘျဆိုဒျ စာမကျြနှာမှာ သှားရောကျ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံ Oxford တက်ကသိုလျက နောကျ သုတသေနပညာရှငျမြား အဖှဲ့တဖှဲ့ကလညျး အလားတူ ပဲ လကျကိုငျဖုံး သုံး app တခု ဖွဈတဲ့ Mozzwear ကို သုံးပွီး ငှကျဖြား ခွငျတှကေို သူတို့ရဲ့ အသံတှနေဲ့ ခှဲခွားသိဖို့ ကွိုးစားနတောပါ။
ခွငျတှရေဲ့ တဝီဝီမွညျတဲ့ အသံကွားလိုကျတာနဲ့ အမြားစုက ရိုကျဖို့ ပွငျနကွေပမေယျ့ ခွငျကို မရိုကျခငျ လကျကိုငျဖုံးကို ထုတျပွီး အရငျ မှတျတမျးတငျကွဖို့
သုတသေန ပညာရှငျတှကေမေြျှာလငျ့ နကွေကွောငျး
VOA သတငျးထောကျ Asher Jones ရဲ့ ပွောကွားခကျြကို တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့ နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။